သင်၏လိင်မှုတိုးတက်မှု - ပျော်ရွှင်ရန်သော့များ | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
သင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုသည်ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားခြင်းဟုဆိုလိုသည်ကိုသင်သိပါသလား။ အကြောင်းကတော့သူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကာယနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်နွှယ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုစွန့်လွှတ်ပြီးအချိန်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ရောစိတ်ပါပါ ၀ င်ရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ နှစ် ဦး စလုံးချိတ်ဆက်သောအခါ, ဘာမျှမမှားသွားနိုင်ပါတယ်!
ယခုသင်သိသော လိင်သည်သင်၏ဘ ၀ ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်, ဒီအသှငျအပွငျတိုးတက်စေရန်နိုင်ဖို့သော့တစ်ချောင်းသိရန်လိုအပ်သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ပျော်ရွှင်ချင်ကြသည်မှာကျွန်ုပ်တို့မျက်စိထဲတွင်တောက်ပနေသည်ကိုသတိပြုမိပြီးစွမ်းအင်အားလုံးကိုပေးသောစိန်ခေါ်မှုအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်မည်သို့သိလိုသနည်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ တွင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းဖြစ်လာသည့်ဒဏ္numerousာရီများစွာမှသယ်ဆောင်သွားခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒါကစာကိုကျွန်မတို့နောက်မလိုက်သင့်ဘူး။ လိင်မှုကိစ္စ၌သာမကယနေ့ခေတ်အခြားရှုထောင့်များတွင်ပါ။ ပျော်ရွှင်ဖို့ဆိုရင်ပျော်ရွှင်မှုကိုမတားဆီးနိုင်တဲ့အတွေးအခေါ်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖယ်ရှားပစ်ရမယ်မိမိကိုယ်ကို၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့မဟုတ်ယေဘုယျအားဖြင့်လိင်နှင့်ပတ်သက်သောပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာစွဲချက်များအပါအဝင်
အရာအားလုံးကိုမေ့ပစ်ခြင်းသည်ပျော်မွေ့ရန်ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် သင်အမှန်တကယ်လိုချင်တာသို့မဟုတ်လိုအပ်တာကိုအာရုံစိုက်ပါ။ သင်ဤအဆင့်ကိုတက်မှသာလျှင်သင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုကိုစတင်နိုင်ပါသည်။ အစ မှစတင်၍ အတွေ့အကြုံအသစ်များသို့သင်ကိုယ်တိုင်သယ်ဆောင်သွားရန်သင်မခက်ခဲပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသင်သည်၎င်းတို့ကိုသင်ရွေးချယ်သူဖြစ်သည်။
သူတစ်ပါးအားမိမိကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းစွာသိရန်လိုအပ်သည်ဟုအမြဲဆိုလေ့ရှိသည် ၎င်းသည်သိသာထင်ရှားနေပုံရသော်လည်းလိင်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင်တော့အမြဲတမ်းဖြစ်လေ့မရှိချေ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့ကြိုက်တာကိုတကယ်သိမှသာအဲဒါကိုအပြည့်အ ၀ ခံစားနိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် မိမိကိုယ်ကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ခြင်းသည်ပထမအချက်ဖြစ်သည်ဟုအကြံပြုသည် ကုသရန်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုနက်နက်နဲနဲသိထားသင့်သည်၊ သင့်ကိုဘာကြောင့်တုန်လှုပ်စေသလဲသို့မဟုတ်သင့်အတွက်မည်သည့်ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုမှမရှိပါ။ ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလိင်မှုကိစ္စမှာရှေ့ကိုခြေလှမ်းလှမ်းပြီးစိတ်ကူးယဉ်တွေဒါမှမဟုတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ရောက်လာလိမ့်မယ်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်တစ် ဦး တည်းဖြစ်စေ၊ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဆဖြစ်စေနှစ်ဆသောပျော်ရွှင်မှုခံစားရမည်။
အနည်းငယ်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းဖွင့်လှစ်အမြဲကောင်းလှ၏။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါတို့တကယ်ကွဲပြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနည်းနည်းထပ်ပြီးသိပြီးအသေးစိတ်လေ့လာနိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် သင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်နောက်ထပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အရာမှာအသစ်သောအလေ့အကျင့်များတွင်မိမိကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်ရန်ဖြစ်သည်အသစ်သောအရာများကိုကြိုးစားလေ့လာပြီးအဆင့်တိုင်းတွင်သင်ယူပါ။ ထို့ကြောင့်စားပွဲပေါ်ရှိလိင်မှုကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်ကိုယ်သင်ကောင်းစွာအသိပေးရန်မထိခိုက်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့ကသိပ်မများဘူး၊ ဒါကြောင့်သင့်ကိုအကောင်းဆုံးခံစားရစေတဲ့အရာတစ်ခုကိုသင်အမြဲတမ်းရွေးချယ်ရလိမ့်မယ်။ အခြားလူများထံမှလာသည့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပုံပြင်များကိုသင်ပင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။
ဤလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သည်၎င်း၏ဆားငန်ထိုက်သောမည်သည့်မီးပွားကိုမဆိုငြိမ်းအေးစေသည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကအမြဲဝေးကပြေးရပေမည်။ ဘယ်လိုလဲ? ကောင်းပြီ ကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားရမည့်ရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးရှိသည် - နေရာအမျိုးမျိုးသို့မဟုတ်ရာထူးအမျိုးမျိုးနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိုစိတ်ကူးယဉ်များကသယ်ဆောင်သွားခြင်းကဲ့သို့သော အကြောင်း, ငါတို့မဖော်ပြမှီဒါပေမယ့်အမြဲတမ်းဒီဘာသာရပ်အတွက်အလွန်ကြီးစွာသောအခန်းကဏ္ have ရှိသည်။ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်စေ၊ စုံတွဲဖြစ်စေအပြောင်းအလဲများသည်အမြဲတမ်းပိုကောင်းလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့တွင်တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်နေသောမီးပွားကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ငါတို့သာအမြဲတမ်းအတူတူဆက်လုပ်ပါက monotony နှင့်သာတွေ့ရပြီးအပြုံးသည်လျင်မြန်စွာပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။
အများကြီးရှိပါတယ်, အလွန်ကွဲပြားခြားနားသော, ခေါ်ဆောင်သွားကစားစရာများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သင်၏အတွေ့အကြုံသစ်များကိုခံစားရန်။ အားလုံးအရသာများအတွက်အကြံဥာဏ်များ, တစ် ဦး တည်းသို့မဟုတ်စုံတွဲတစ်တွဲအဖြစ်ပျော်မွေ့ရန်။ သူတို့အားလုံးနှင့်အတူသင်သည်သင်၏ဘ ၀ ကိုပျော်ရွှင်ဖွယ်အကောင်းဆုံးခံစားမှုဖြစ်စေမည့်ထူးခြားသည့်အချိန်လေးများကိုလည်းသင်နေထိုင်လိမ့်မည်။ အဲဒါအတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် erotic အလှကုန်များအတွက်ရိုးရာအရှိဆုံး vibrator များကိုဖော်ပြနိုင်သည်။ ကောင်းစွာသိထိုက်သောကမ္ဘာသည်သင်၎င်းကိုအနည်းငယ် ပို၍ သိရန်ထိုက်တန်သည်။ သင့်အတွက်၊ သင့်ကျန်းမာရေးအတွက်နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်သင့်ဘဝအတွက်။
သင်၏လိင်မှုကိုတိုးတက်စေရန်ဤအချက်များသို့မဟုတ်အကြံပေးချက်များအပြင်သင့်ကိုစောင့်နေသောအခြားများလည်းရှိသေးသည်မှာမှန်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သိသည့်အတိုင်းအလွန်ကျယ်ပြန့်သောကမ္ဘာကြီးဖြစ်သောကြောင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်မရှိသေးပါ။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည်သင်၏အိမ်မှအဆင်ပြေစွာဆက်လက်ပြုလုပ်လိုပါကတစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် Diversual ကဲ့သို့သောမှော်စာမျက်နှာများကိုရှာဖွေရန်သင့်အားကူညီသည်။ သင့်ကိုပိုမိုသိကျွမ်းလာရန်၊ အနည်းငယ်ပိုပျော်မွေ့ရန်နှင့်သင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘ ၀ ၌ထိုခံစားချက်ကိုထပ်ဖြည့်ပါ။ သင်နှစ်သက်သောလေ့ကျင့်မှုများ၊ အကြံဥာဏ်များနှင့်လှုံ့ဆော်မှုအသစ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » ကျန်းမာခြင်း » Relaciones » သင်၏လိင်တိုးတက်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုရရန်သော့ ၅ ချက်